2. आफ्नै डेटाबेस कसरी तयार गर्ने ? - Investigative Journalism Manual
यस बाहेक, आफूले खोज गरेका सूचनाको समयक्रम लेखेर राख्नुपर्छ । यसो गर्नुको अर्थ आफ्नो स्टोरी पनि यही समयक्रममा राख्नुपर्छ भन्ने होइन । आफूले पाएका जानकारीलाई घटना भए अनुसारका समयक्रममा राख्नका लागि यसो गर्नु परेको हो । कुन काम पहिले भयो र कुन काम त्यसपछि अनि कुन कुन काम सँगसँगै भए भन्ने ’bout स्पष्ट तस्वीर लिनका लागि यसले सहयोग गर्छ ।
यसको उल्टो, गुणात्मक सूचनाले मानिस, घटना, कारण, नियत, मनोभाव र तर्क जस्ता जानकारी भन्ने बुझाउँछ । धेरै ठाउँमा संख्यात्मक सूचना अथवा लिखित रेकर्ड पाउन कठिन हुन्छ ’cause त्यस्ता सूचना अथवा रेकर्ड राखिएकै हुँदैनन् । कागजात नपाइने यस्तो अवस्थामा खोजी गर्ने अरू दुईवटा तरिका छन्ः आफैंले अवलोकन गर्ने र सम्बन्धित मानिससँग पहिल्यै निर्धारित प्रश्नावलीका आधारमा जानकारी लिने । यसो गरेर आफ्नै डेटाबेस तयार गर्न सकिन्छ । यहाँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने कुनै पनि विषयमा खोज गर्न शुरू गर्दा थप जानकारीका लागि फलानो मानिस अथवा फलानो समुदायलाई भेट्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । तर डेटाबेस तयार गर्दा यसको ठीक उल्टो हुनसक्छ । जस्तै जमीनको कुनै कित्ता अथवा ठेगाना जस्ता जानकारीले तिनका मालिकतिर डो¥याउँछन् ।
यसरी भेला गरिएका जानकारी व्यवस्थित गर्नका लागि केही उपाय छन् जसका सहायताले अन्तर्वार्ता, जानकार स्रोत, जानकारी दिने व्यक्ति र उनीहरूको ज्ञानको क्षेत्र जस्ता जानकारीलाई व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ । प्रश्नावली र फ्याक्ट शिट यस्तै उपाय हुन् जसका सहायताले अहिलेसम्म स्थापित तथ्य र प्रमाणित हुन बाँकी आफ्ना मान्यताको रेकर्ड राख्न सकिन्छ । आफ्नो स्टोरीसँग सम्बन्धित स्टोरीको हाइपर लिंक, तथ्य, तथ्यांक, डेटाब्यांक, बैठकका निर्णय पुस्तिका अथवा अन्तर्वार्तालाई व्यवस्थित गर्न पनि सकिन्छ । धेरै पत्रकारहरूले आफ्ना सूचना व्यवस्थित गर्न इभरनोट नामक इन्टरनेट टुल चलाउने गरेका छन् तर गोप्य जानकारी यसमा राख्नुहुँदैन । कुन टुल चलाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्नुअघि त्यो कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने ’boutमा ध्यान दिनुपर्छ ।